Uyenza njani ilogo emva kweZiphumo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
En Emva kweZiphumo, ilogo ayisiyiyo kuphela into onokuyenza. Kukho iiprojekthi ezingenakubalwa onokuzinika ukugqitywa okwahlukileyo onokukufumana kuphela kule nkqubo.
Kodwa ungayenza njani ilogo emva kweZiphumo? Ithini le nkqubo? Ukuba uyazibuza, ke sikunika izitshixo ukuze wenze enye.
2 Kodwa ungayenza njani ilogo emva kweZiphumo?
2.1 Lungisa ifayile yelogo
2.2 Ngenisa i-logo kwiZiphumo eziMva
2.3 Sebenza ngokubumba
2.4 Yenza umboniso ngesakhelo
2.5 Yondla ngokuma kwemilo
2.6 Lungisa ixesha loopopayi
2.7 Thumela ngaphandle kwelogo yoopopayi
3 Ingcebiso yethu ebalaseleyo
Into yokuqala ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uqalise kwesi sifundo yile nto emva kweZiphumo, yile nkqubo siza kuyisebenzisa. Ukuba sele uyifakile, ngokuqinisekileyo uyazi kakuhle ukuba yeyiphi na into oyinikwayo, kodwa ukuba ayifani naleyo kwaye uvile ngayo, iyakunomdla.
Emva kweempembelelo ngokwenene isicelo semizobo yobuchule esisetyenziselwa ukwenza imifanekiso, iividiyo, njl. ezihambayo kwaye baneziphumo ezizodwa. Ngamanye amagama, isetyenziselwa ukwenza uyilo ngokuhamba.
Kwimeko yokusebenzisa Iziphumo emva kweelogo, uya kufumana iziphumo ezinomtsalane ngakumbi, kuba loo logo iya kuba neziphumo ezizodwa (iya kukhanya, iya kuhamba, njl.), Into ethi, kwezinye iimeko, ayinakwenzeka.
Kwaye oku kulungile? Ukuthatha ingqalelo yokuba namhlanje ingqalelo yabantu kwi-Intanethi (kunye neenethiwekhi zentlalo) yimizuzwana emi-3 kuphela, inyani yokudala uyilo olunokutshintsha imilo okanye ukuhamba, luneziphumo ezizodwa, luya kuyenza ibe nomtsalane ngakumbi.
Kodwa ungayenza njani ilogo emva kweZiphumo?
Akululanga ukufumana abantu abazinikezela ngokukodwa kule nkqubo. Into yokuba ihlawulwe kwaye akukho lula ukuyisebenzisa ukuba awunalo ulwazi lwangaphambili (nditsho nezifundo ozifumanayo kwi-Intanethi) kuthetha ukuba azikho zininzi ezisungulwe.
Kodwa ukuba awukhathazeki malunga nexesha oza kulinikela, kwaye ufuna isiphumo sanamhlanje kwaye ngaphezulu kwako konke okunempembelelo, kuya kufuneka uzame. Ukongeza, sikushiya le khokelo ukuze ungabinangxaki.
Los amanyathelo ekufuneka uwathathe emva kweZiphumo zeLogo Zizo:
Lungisa ifayile yelogo
Kutheni le nto sithetha ngelogo ukuba kanye le nto ufuna ukuyenza emva kweZiphumo zeMpawu ilogo? Ewe, kuba le nkqubo ngokwayo ifuna isiseko ukuze ikwazi ukuphilisa. Ngamanye amagama, kuya kufuneka wenze i-logo yangaphambi kokuba uhambe "ngezixhobo zemilingo" ze-AE kwaye uyizise ebomini.
Ukwenza oku, sicebisa ukuba Sebenzisa iAdobe Illustrator okanye nayiphi na enye inkqubo yokuhlela imifanekiso okanye uyilo lwe logo. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iziphumo zikwifomathi yevektha, kuba oku kuyakuvumela ukuba utshintshe umfanekiso nayo yonke into ekuwo ngaphandle kokuphulukana nomgangatho. Kananjalo kuya kufuneka uyifake kwimibala ye-RGB, hayi i-CMYK.
Ngenisa i-logo kwiZiphumo eziMva
Ngoku ukuba logo uyenzile (kulungile, sisiseko nje), lixesha lokuba uqalise inkqubo.Ukwenza oku, vula emva kweZiphumo. Ekuqaleni kuqhelekile ukuba, ukuba awuzange uyisebenzise, ​​okanye incinci kakhulu, iyakongamela kancinci, kodwa ke kulula ukuyisebenzisa.
Into ekufuneka uyenzile kukungenisa ilogo. Ukwenza oku, yiya ku Ifayile / ukungenisa / ifayile. Iifolda zakho ziya kuvela phaya, yiya nje apho une logo, ukhethe kwaye uyivule. Kwaye kunjalo.
Siza kusebenza kwifayile. Ukwenza oku, uza kwenza umsebenzi ongaphezulu, uhlele kwaye usebenzise oopopayi, kwaye uya kuyenza ngokwento ofuna ukuyiphumeza kunye nelogo. Ewe kunjalo, gcinani engqondweni ukuba ilogo yoopopayi akufuneki ihlale ngaphezulu kwemizuzwana emihlanu, kwaye oko kuthetha ukuba awunyanzelekanga ukuba wenze iziqulatho ezininzi.
Kuyinyani ukuba ixesha lokuqala unokuchitha ixesha elininzi (ngesiphumo semizuzwana emihlanu) kodwa emva kokuba uyenzile amatyeli aliqela elo xesha liya kuncitshiswa.
Ngokomzekelo, ukuba ufuna imvelaphi elula, kuya kufuneka ucofe ekunene kwipaneli yokubumba kwaye ukhethe eNtsha / eQinisekileyo. Ukuba ilogo yakho imhlophe, unokubeka imvelaphi emnyama, kodwa ungabeka nawuphi na umbala owufunayo.
Emva koko, ubiza loo mbala kwaye ucofe Yenza ubungakanani beComp. Unika u-Ok kwaye kuya kufuneka urhuqe ilogo yakho ukusuka kwipaneli yeprojekthi ukuya kumda wexesha. Ngale ndlela uza kubona imboniso yendlela ebukeka ngayo. Ukuba ubona imvelaphi kuphela, kuya kufuneka utshintshisane maleko, ukuze eyakho (yelogo) ibonakale kuqala.
Icebo elisebenzayo kakhulu emva kweZiphumo kukuguqula ukwakheka okungafaniyo (ungakwenza oku ngeqhosha lasekunene kwifayile yelogo (kwiphaneli yokwakheka) kunye noYila / Guqulela kwiCompered Comp).
Yenza umboniso ngesakhelo
Emva kweZiphumo, kunye nezinye iinkqubo ezininzi zoopopayi, sebenza ngezakhelo. Ezi zinto zisebenza njengohlobo lwamanqaku oluchonga amaxesha apho oopopayi banokuqala kwaye baphele.
Eyona ilula kakhulu onokuyenza apha yile ukubonakala ngokuthe ngcembe. Into ekufuneka uyenzile kukugxila kwi-opacity, eya kuthi ibe yi-100% kuba ilogo ibonakala ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukuba ucofa kwiqhosha lestopwatch ecaleni kweqhosha le-Opacity, uya kubona umda apho ungabeka khona umgca wexesha, uyenze ukuba ivele kwaye inyamalale ngendlela yoopopayi. Umzekelo, utshintsho opacity kwimizuzwana emibini ukusuka kwi-0 kuye kwi-100%.
Zininzi iindlela ezininzi zokuphila ngesakhelo, kuya kufuneka ufumane eyona uyithandayo kwaye uyisebenzise.
Yondla ngokuma kwemilo
Olunye ukhetho lokuphilisa (olunokudityaniswa nolwangaphambili) lupopayi olunamanqwanqwa eemilo. Oku kuhamba phambili ngakumbi, kodwa kuyakuvumela yenza iziphumo ezinobungcali kunye nolwazi, ayisiyombono imbi ukujonga oku. Umzekelo, unokufumana isicatshulwa ukuba sizitsale, amadangatye okanye umkhenkce ukuba ukhule kuso, njl.
Lungisa ixesha loopopayi
Njengoko besitshilo ngaphambili, oopopayi bophawu lwe logo akufuneki lube ngaphezulu kwemizuzwana emihlanu. Kodwa, ngelo xesha, udinga konke oku kungasentla ukuze usebenze, kwaye kwangaxeshanye vumela ilogo ibonakala ngokucacileyo kwaye into efuna ukuyiveza iqondakala kakuhle. Ke ngoko, kangangoko kunokwenzeka, kungcono ukuba ungagqithisi ngaphezulu.
Jonga ubulula kwaye, ukusuka apho, nika into eyandisa imeko yelogo. Hayi kwakhona.
Thumela ngaphandle kwelogo yoopopayi
Nje ukuba ugqibile, uya kuba nelogo yakho yoopopayi, kwaye kuya kufuneka uyikhuphele kuphela.
Ukwenza oku, sicebisa ukuba uye kwiFayile / ukuThumela ngaphandle / ukongeza kulayini weAdobe Media Encoder. Ke, uya kuyifumana kwifayile ye-mp4. Ukuba uyayifuna kwi-GIF, kuya kufuneka uye kwiscreen seMedia Encoder kwaye ukhethe loo fomathi.
Ingcebiso yethu ebalaseleyo
Emva kweZiphumo yinkqubo onokufikelela kuyo iziphumo ezilungileyo. Kodwa kuya kufuneka wenze uphando oluninzi. Ukuba ufuna ukwenza ilogo elula, unezifundo zevidiyo ezinokukunceda uzilandele. Unga zidibanise ngokweziphumo ofuna ukuziphumeza.
Ngaba unesibindi sokwenza ilogo emva kweZiphumo? Mhlawumbi into enomdla ngakumbi njenge-trailer?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani ilogo emva kweZiphumo